Kupararira Kwemaitiro muMetro Istanbul | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKupararira kwaMatanho muMetro Istanbul
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, TURKEY, chitima
danho rekuputika mune metro istanbul
Mukati meriyero yekurwisa chirwere chekoronavirus, rave dambudziko repasirese, sangano rega rega uye vanhu vamwe nevamwe vevanhu vane mabasa akakosha. zvose munzvimbo zuva kupfuura mamiriyoni 2 mutakurwi-akatakura Turkey guru guta njanji dzaishandisa pamwe Metro Istanbul vaviri akamiririra vanhu kudzivirira utano zvose kushanda yemapurisa uye mufambi uye mudonzvo vachionana, kunyange nhepfenyuro uye mahofisi, refectory vanoshandisa chete mudonzvo ritenderane, wekishopu vakatora matanho ekuchengetera nharaunda yakakodzera yekurwisa hutachiona kwese munzvimbo yekuchengetedza.
Covid-19 - Chii chinonzi New Coronavirus?
Ndiro zita rakapihwa rudzi rwetachiona izvo zvakakonzera denda iro rakaziviswa nyika semhedzisiro yeguta reWuhan reChina kubva pakutanga kwaNdira 2020. Nepo hutachiona hwe corona hutachiona hunozivikanwa nevakuru vawo asi husina kukonzera chirwere muvanhu, hwakatambanuka kubva kumhuka kuenda kumunhu uye huchibva kuvanhu nekuchinja. Kutengeserana kwanhasi kwave dambudziko renyika dzepese munguva pfupi nekuda kwezvikonzero zvakaita sekukura uye huwandu hwekufamba kwega. Pakupedzisira, izvi zvaziviswa neWorld Health Organisation (WHO) seGurukota rePasi rose - Kupararira Kwenyika.
Matanho akagadziridzwa naMetro Istanbul semhedzisiro yezviyero, zvidzidzo uye nyaya dzakatorwa pasi rese seizvi zvinotevera;
Basa Redu Pamberi Pechekutyisidzira
Sa Metro Istanbul, apo denda rakanga risati raonekwa munyika medu, takashanda neIstanbul Metropolitan Municipality pamusoro pekudzivirira.
Vashandi vepasi rese nevekunze, vatungamiriri vezvokufambisa pamwe nemasangano akateedzerwazve uye kufonerwa kwakagadzwa, uye gadziriso uye ongororo dzakaitwa pasi rese zvakaongororwa Bvunzo uye ongororo dzakaitwa neMetro Istanbul Workplace Health Board pamwe nekutsanangurwa kwe Ministry of Health, Sayenzi Board pamwe nevezvinzvimbo zvehurumende, matanho ari kutorwa panhau yekubuda munyika yedu, zvirongwa zvekuita zvakavandudzwa uye zvidzidzo zvakatangwa mukati mehurongwa hwekutanga. Wakagadzirira kuita TÜRSİD (Turkey Rail System Operators Association) akanga Aiudzawo.
Yedu yekudzivirira Kupesana nekubuda kwekupokana
Zuva nezuva vanhu vanopfuura mamiriyoni 2 mutakurwi-akatakura Turkey guru opareta mumaguta makuru njanji mugadziriro, edu mubhazi uye vashandi vedu kudzivirira utano, kuti iwedzere kudzivirira kupararira yatanga takava zvinotevera matanho kuupenyu.
Kungwarira Kunotorwa Kune Vafambi Vedu:
1. Mhando dzose dzemidziyo uye nzvimbo dzakasangana nevatifambisi nevashandi dzinosanganisira nzvimbo dzemukati memota medu yese uye zvinoshandurwa, matiketi muchina, masimendi, vanokwira, vanokwira, vakagadzika matanho ekubata nenzvimbo dzekugara pazviteshi zvedu, vakasungwa nemidziyo yekuuraya hutachiona kwemazuva makumi matatu. Iyo disinfectant yakashandiswa yakaiswa nenzira yefogging uye ine zvinhu zvekare zvehutachiona uye zvinopesana nehutachiona izvo zvisingakuvadzi hutano hwevanhu.
2. Zvirongwa zvekuita zvemakambani ekufambisa uye epasi rese ekufambisa emakambani uye
Covid-19 application yakaongororwa uye zvatave kushandisa izvozvi zvakaongororwa.
3. Kuti kuderedze kushushikana kwepfungwa kune vatinofamba navo uye kuvazivisa nenzira kwayo, ruzivo nemifananidzo zvine chekuita nezvekuuraya hutachiona uye zvidzidzo zvekuchenesa zvakagadzirirwa. Aya mabasa akagovaniswa edu edhijitari skrini uye zvemagariro nhau maakaunzi mune edu mota uye zviteshi.
4. Masks akatangwa kuti apiwe vaperekedzi vakakanganisika mukati merwendo, aifanira kuenda kuhutano hwehutano kana akakumbira rubatsiro rwehutano.
5. Kunyangwe kuderera kwehuwandu hwevafambi, zvakasarudzwa kuenderera mberi nendege nenzira yekusaita vanhu vakapunzika vatyairi vedu maererano nesarudzo dzeIMM.
6. Kusvika padanho repiri, Night Metro ndege dzakamiswa.
7. Inonyanya kushandiswa kwekushanya kwekushanya uye nhamba dzevatakuri
Iyo TF90 Maçka-Taşkışla uye TF1 Eyüp-Piyer Loti tefelerik mitsara, iyo yakaderera ne2%, yakavharwa kwenguva pfupi kushanda.
8. Sarudzo yekushandiswa kwemahara kwemotokari dzekufambisa dzavanhu nevanoona nezveutano yakaiswa mukuita.
9. Kuitira kunyevera vatyairi vedu "Chengetedza Nzvimbo Yako Yemagariro" mumotokari dzechitima, zvitambi zvine yambiro yekugara zvatanga kuiswa kumota.
Kuchenjerera Kunotora Vashandi vedu:
1. Vashandi vari panjodzi yekusangana padyo nevapfu vakapihwa dzidzo yehutsanana, uye huwandu hwekuchenesa hwakawedzera munzvimbo dzavanoshanda.
2. Mune makoti edu ezvitima, nzvimbo dzekuonana nevatyairi vechitima dzinovezwa / dzichi disinfis.
3. Matanho akatorwa kuti ave nechokwadi chehutsanana uye kuchengetedzeka kweSMAMP (Driverless Metro Emergency Response personnel) inoshanda paM5 Üsküdar-Çekmeköy driverless metro line mota.
4. Zvirevo uye sarudzo dzakaitwa neIMM uye Ministry of Health zvakateedzerwa ipapo, uye ruzivo nemaitiro zvakagovaniswa nevashandi vedu.
5. Kuuraya hutachiona kwaiitwa pese patinobatana
6. Pamusuwo wekhampasi, zviyero zvemoto zvakatangwa nemidziyo yekusangana.
7. Nguva yekuzorora yekutonga yakashandiswa zvinoenderana nePurezidhendi Mutemo wevashandi vedu vane chirwere chisingaperi chehutano, hurema, vakadzi vane pamuviri uye vanopfuura makumi matanhatu ezera.
8. Kune vedu O ve s vashandi, zvirongwa zvakaitwa kuti zvitsigire #evdekal application nekugonesa vashoma vashandi kubuda kunze sezvinobvira neRemote Work uye Recycling Work system.
9. Maitiro ehutsanana akawedzerwa mudzimba dzekudyira uye mavheni etii, uye sarudzo itsva dzakatorwa kuitira kudzivirira kusangana kwevashandi mumapazi aya. Kuvharwa kwema package kwakatangwa mukugoverwa kwechikafu, uye kutevedzera zuva nezuva kwevateresi nevashandi vepakati tei kwakawedzerwa kune zvirongwa zvebhizinesi.
10. Vashandi vanoenda kune dzimwe nyika vakaonekwa uye vakateedzerwa pasi pe Ministry of Health Action Chirongwa.
11. Vashandi nevamakambani vakaziviswa kuitira kuti vatange kutaurirana nevanotengesa nhare ne-e-mail, uye kudzikisa vashanyi vanoshanyira uye kushanya kwemakambani.
12. Iyo Emergency Action Plan maitiro uye nheyo zvakakurukurwa ne "coronavirus" ajenda kuOHS Committee. Chirongwa Chekuita chakagadziridzwa ndokugoverwa nevashandi vese.
13. Masangano ese anoda kubatanidzwa zvakanyanya senge mukati meimba kudzidziswa uye musangano zvakamisikidzwa.
14. Zvinhu zvinofanirwa kuitwa nezvehutsanana hwemunhu zvakatanga kugovaniswa nevashandi vedu uye vatyairi kazhinji.
Mushure mezvidzidzo zvese izvi, zvirongwa zvekupindura, zvinoratidzira kubva kune vakapfuura, tsananguro uye yambiro dzakaitwa neIMM uye Ministry of Health zvakaongororwa uye zvirongwa zvekuita zvakagadzirirwa chikamu chinotevera.
Simba rekuchengetedza rakawedzera muMetro uye İZBAN
Kuwedzerwa kuchengetedzwa kwezviyero pamitambo ye metro muAzerbaijan
Kuchengetedzwa kwezviyero pazvivako zviteshi zveMetro Brussels zviri nani
Zvitsva zvekuchengetedza zvayo paAtatürk Airport nemasitroti
Kupararira Kurongwa kweMetro uye Tram Services mu İzmir
Tramway Njodzi uye Kuderedza Matanho
Kuchengetedzwa kwezviyero mumasvingo ezvitsuwa zveFrance zviri pane zvekare zvakare
Simba rekuchengetedza rakawedzerwa muAnkara
Kuchengetedzwa kwemaFrance kubva kuFrance kusvika kumigwagwa yezvitima
Zvimwe zvekuchengetedzwa kwezvikwereti zvinouya kuzviteshi zvezvitima muFrance (Vhidhiyo)
Simba rekuchengeteka maitiro zvakatorwa muMarmaray
Night Metro Zvikuru